प्रिस्क्रिप्शन बिना एन्टिबायोटिक किन्नुहोस् $ As [केवल एक क्लिक]
हामीले भेट्यौं5उत्पादनहरू तपाईका लागि उपलब्ध छन्
Minocycline खरीद गर्नुहोस्
एन्टिबायोटिक के हो?
एन्टिबायोटिक १ 1940 .० को दशकमा शुरू भएको थियो। निमोनिया, क्षयरोग, कान संक्रमण र अन्य जस्ता धेरै रोगहरू एन्टिबायोटिकको प्रयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। एन्टिबायोटिकले स्वस्थ होस्ट कोषहरूलाई हानी नगरी विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूलाई छनौट गर्दछ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका एन्टिबायोटिकहरू छन्। तिनीहरू आफ्नो प्रयोग र आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नका साधनहरूमा भिन्न छन्। एन्टिबायोटिकहरू जीवाणु, फg्गस र अन्य साना जीवहरूसँग लड्न आधुनिक जैविक हतियारहरू हुन् जसले मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ। पहिलो एन्टिबायोटिक २० औं शताब्दीमा पत्ता लागेको थियो। त्यसोभए, एन्टिबायोटिक्सको साथ हाम्रो अनुभव अझै यसको असक्रिय अवस्थाहरूमा छ। तिनीहरू हतियारहरू हुन् जसले ब्याक्टेरियालाई धेरै किसिमले आक्रमण गर्दछन्। केहि एन्टिबायोटिकले केही खास आन्तरिक प्रक्रियाहरूमा बाधा पुर्‍याएर भित्रबाट ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गर्दछ। अरूले ब्याक्टेरिया मार्न क्रूर शक्ति प्रयोग गर्छन्। दुबै प्रकारका ब्याक्टेरियाहरूको बिरूद्ध साँच्चिकै प्रभावकारी हुन सक्छ।
त्यहाँ कस्तो प्रकारका एन्टिबायोटिकहरू छन्?
त्यहाँ बाहिर तपाईं एन्टिबायोटिक को धेरै प्रकार को पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू तिनीहरूको उद्देश्य, तिनीहरूको प्रतिष्ठा र उनीहरूको साझा प्रयोगहरूमा आधारित छन्। यो सूची कुनै पनि हालतमा पूरा छैन। धेरै नयाँ कम महत्त्वपूर्ण प्रकारका एन्टिबायोटिकहरू हरेक दिन पत्ता लाग्छ।
एमिनोग्लाइकोसाइड एन्टिबायोटिकले केही ग्राम-नकारात्मक ब्याक्टेरियाहरूलाई प्रोटीन उत्पादन गर्न रोक्दछ। तिनीहरू निल्न वा इंजेक्शन द्वारा लिन सकिन्छ। यो राम्रो छ यदि तपाइँ तिनीहरूलाई निल्नुहुन्छ किनभने तपाइँको शरीरसँग तिनीहरूसँग समायोजन गर्न पर्याप्त समय छ। ब्याक्टेरियाले एमिनोग्लाइकोसाइड प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न सक्छ।
तिनीहरू सामान्य रूपमा अन्य एन्टिबायोटिकहरू जस्तै सेफलोस्पोरिनहरू र पेनिसिलिनहरूको तुलनामा सानो र दुर्लभ एलर्जीको कारण दिन्छन्। तिनीहरू जननेन्द्रिय, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ र श्वासप्रश्वासको पथ संक्रमणको उपचारमा उत्तम हुन्छन्। तिनीहरूको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट पेटको जलन हो।
सेफलोस्पोरिनहरू generations पुस्तामा विभाजित छन्। यो कम्प्युटर उद्योगमा जस्तै छ। प्रत्येक पुस्ता ब्याक्टेरियाहरूको उपचारमा बढी अद्भुत छ। ती पेनिसिलिनसँग सम्बन्धित छन्। तिनीहरूका मुख्य प्रयोगहरू निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, केही प्रकारको छाला संक्रमण, स्ट्रेप गला र स्टेफ संक्रमणको उपचारमा हुन्।
फ्लोरोक्विनोलोन्स सामान्य एन्टिबायोटिक हुन्। तिनीहरू धेरै प्रकारका ब्याक्टेरियाहरूलाई हटाउन काम गर्दछन्। कहिलेकाँही तीनिहरूले पेट दुखाइ, पखाला, बान्ता र मतली जस्तै साइड इफेक्टहरू उत्पादन गर्छन्। तिनीहरूको साइड इफेक्टहरू सामान्यतया अस्थायी र हल्का हुन्छन्। तिनीहरू ब्याक्टेरियाहरूलाई DNA उत्पादन गर्न सक्ने ब्याक्टेरियाहरूसँग हस्तक्षेप गरेर गुणा गर्नबाट रोक्छन्।
यो पहिलो एन्टिबायोटिक हो। यो दुर्घटनामा अलेक्ज्याण्डर फ्लेमिंगले पत्ता लगाएका थिए। तिनीहरूले श्वासप्रणाली, दन्त, छाला र कानमा संक्रमण जस्ता विभिन्न प्रकारका संक्रमणको उपचार गर्दछन्। उनीहरूले ब्याक्टेरियाको भित्ताहरू तोड्दछन्। नतिजा स्वरूप, ब्याक्टेरिया मारिन्छन्।
तिनीहरू सामान्य एन्टिबायोटिक पनि हुन्। तिनीहरू धेरै प्रकारका ब्याक्टेरियाहरूको बिरूद्ध काम गर्दछन्। तिनीहरूले late० को दशकमा पत्ता लगाए। तिनीहरूको सबैभन्दा सामान्य प्रयोगहरू हुन्: एक्ने, दाग भएको ज्वरो, मूत्र पथ संक्रमण, टाइफस, यौनजन्य रोग र अधिक।
म एन्टिबायोटिक कहाँ किन्न सक्छु?
हाम्रो फार्मेसीको प्राथमिकता हजारौं ग्राहकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्तम गुणवत्ताको सस्तो औषधीहरूको पहुँच प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु हो। यो एकदम फार्मेसीमा नै, तपाईं कुनै पनि समयमा तपाईंलाई मन परेको एन्टिबायोटिक खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई कडा गुणस्तर नियन्त्रणको साथ इजाजतपत्र प्राप्त उत्पादकहरू द्वारा निर्मित उत्कृष्ट एन्टिबायोटिक प्रस्ताव गरिन्छ। हाम्रो पेशेवर टोलीले यो फार्मेसीमा तपाइँको हरेक यात्रा सुरक्षित, रमाईलो र धेरै फाइदाजनक छ भनि सुनिश्चित गर्नेछ, किनभने तपाइँ सस्तो एन्टिबायोटिकहरू कुनै पनि मात्रामा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
के म एन्टिबायोटिक अनलाइन किन्न सक्छु?
हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रा ग्राहकहरु आफैंले एन्टिबायोटिक किन्न चाहान्छन् कि अरु आफैं बाट निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्, र हामी प्रिस्क्रिप्शन माग्दैनौं। तपाईं हामीबाट सस्तो एन्टिबायोटिक किन्न यो धेरै सुविधाजनक पाउनुहुनेछ, र हामीले प्रस्ताव गरेको कम मुल्यहरूमा तपाईं चकित हुनुहुनेछ। हामी किन यति कम मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्छौं भन्ने कारण यो हो कि हामी तपाईको औषधीको वास्तविक निर्माणसँग सीधा काम गर्छौं, त्यसैले तपाईले कहिले पनि आफ्नो औषधि एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा यात्रा गर्न अगाडि आउनु भन्दा पहिले तिर्नु पर्दैन। हाम्रो ग्राहकहरूको सन्तुष्टि हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, जुन हामी किन प्रस्तुत गर्छौं उत्पादनहरुको गुणवत्ता अनुगमन र तपाइँको सुझाव र सुझावहरु को लागी सँधै खुला छ।
हाम्रो फार्मेसीको बारेमा महान कुरा यो हो कि तपाईं यहाँ आफ्नो खोजी रोक्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईंले एकै ठाउँमा खोजिरहनु भएको सबै सेवाहरू पाउनुभयो, उच्च गुणस्तरको एन्टिबायोटिक आवश्यक पर्दैन। हाम्रो फार्मेसीको साथ एन्टिबायोटिक्सको लागि किनमेल, तपाईंसँग सँधै उत्तम गुणस्तरको औषधि र छिटो शिपिंग, साथ साथै पूर्ण गोपनीयता ग्यारेन्टी र निश्चित ग्राहक कुशल समर्थन हुनेछ। हामीसँग तपाईलाई हुन सक्ने कुनै पनि समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न हामी सँधै खुशी छौं, त्यसैले एक सेकेन्डको लागि संकोच नमान्नुहोस् र हामीलाई अहिले एन्टिबायोटिक प्राप्त गर्न हामीलाई भेट्नुहोस्!
हामी सबै नजिकै वा समुदाय फार्मेसीहरूबाट एलोपैथिक औषधिहरू प्राप्त गर्दछौं, तर के तपाईंले कहिल्यै इन्टरनेटमा एन्टिबायोटिक किन्न विश्वास गर्नुहुन्छ? सामान्यतया, एन्टिबायोटिक एलोपैथिक औषधिको एक अंश हो र प्रभावी रूपमा द्रुत हुन्छन्। यसैले अधिकांश चिकित्सकहरूले एन्टिबायोटिक लिन्छन्। एन्टिबायोटिक्स सामान्यतया डाक्टरहरू द्वारा सिफारिश गरिएको हुन्छ केवल यसको विशिष्ट उपचारात्मक प्रभावका कारण अन्य विशिष्ट एलोप्याथी औषधिहरू भन्दा फरक हुन्छ। हामी सचेत छौं कि एन्टिबायोटिकहरू स्थानीय फार्मेसीबाट लिनको लागि उच्च मूल्यको छ, त्यसैले यहाँ अनलाइन एन्टिबायोटिक लिनको लागि अप्टेड गर्नु पर्ने प्रमुख कारणहरू छन्।